Muzvare Khupe Vanotaura Pakuvigwa kweNhengo yeMDC kwaRusape
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana neChishanu mubhuku rekwaGunda kwaRusape, pakuvigwa kwaMai Thabitha Marume, avo vakapfurwa vakafa nevatsigiri veZanu PF svondo rapera.
Vachitaura pakuvigwa kwaMai Marume, mutevedzeri wemutungamiri weMDC, Muzvare Thokozani Khupe, vatora mukana uyu kutaura zviri kuitika munyaya dzezve matongerwo enyika, sezvo mufi akaurayirwa zvematongerwo enyika. Muzvare Khupe vati vanhu vakataura zvavanoda kuburikidza nekusarudza VaTsvangira, asi vave kumanikidzwa kunyarara neZanu PF kuburikidza nemhirizhonga.
NeChina, madzishe ekuMashonaland East akaudzawo vatungamiri veZanu PF, kusanganisira mutevedzeri wegurukota rezvematunhu, VaMorris Sakabuya, kuti Zanu PF inofanirwa kumisa kushungurudza vanhu kana ichida kuti ivhoterwe nevanhu. Madzishe aya anonzi akaudzawo Zanu PF kuti isiyane netsika yekumanikidza vanhu kuita zvavasingadi.
Dunhu reMashonaland East ndiro rimwe rematunhu ari kunyanya mhirizhonga. Ukuwo mukadzi wemutungamiri weZanu PF, Amai Grace Mugabe, vanonzi vakapa neChishanu rubatsiro kune vakapisirwa misha kuManicaland. Nhengo yeZanu PF, VaPatrick Chinamasa, varamba kutaura neStudio 7 nezve mhirizhonga iri kuitwa nevatsigiri vayo.
Jonga Kandemiiri weStudio7 abata Muzvare Khupe, avo vanga vari kwaRusape pakuvigwa kwaMai Marume.
Ukuwo kuBikita, kuMasvingo, vatsigiri veMDC vatatu vanonzi vakambopambwa nemasoja paNyika Growth Point, vakanoshungurudzwa paDuma GMB, mushure mezvo, vakabva vazoregedzwa. Zvinonziwo masoja ari pasi pechirongwa chemaguta, vari kushungurudza vanhu mudunhu iri.
Jonga Kandemiiri weStudio 7 abata mugari wemudunhu iri, VaJohn Tevera, kuti tinzwewo mamiriro akaita zvinhu.